> Resource > Ladnaansho > Trash Mavericks Recovery, ka Trash in Mavericks Ladnaansho Data
Ku dhowaad dhammaan dadka isticmaala computer waa in la kulmeen tan: qalad ah tirtiray sawir ama dukumeenti ah marka aad doonayso inaad u soo jiidayo ama u soo dir meel kale. Taasi waa nooc ka mid ah misoperation dhacdo kasta saacad. Maxaad samayn marka aad nasiib daro waxaa qaba? Qayli, waayo, khasaaraha ka mid ah sawirka, ama ay bilaabaan inay cilinta dukumenti cusub? Dhab ahaantii, ma ahan wax sax ah si ay u sameeyaan in markii ugu horeysay. Markaas waa maxay? Akhri.
Waxa ugu horeeya: Hubi Trash on your computer Mavericks
Sida caadiga ah, haddii aadan la Command + Delete tirtirto wax, faylasha tirtiray dib loo isticmaali doonaa qashinka aad Mac. Sidaas waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa hubinta qashinka. Haddii aad halkaas ka heli file ah, kaliya waxa ay jiidin desktop si toos ah. Markaas file aad tirtiray waa dib. Maxaa dhacaya haddii file ma jirto? Waayo, waxaad ka shubeen Trash ama kaliya waxaa tirtiray amarka + Delete? Weeraryahanka waxyaalaha soo socda ee aad samayn karto dhaqaaq.
Waxa labaad: Ka dhig asalka computer aad
Xaaladdan oo kale, si fudud ma aha waxaad ka heli kartaa file tirtiray ka qashinka. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa ilaalinta asalka computer aad. Taasi waa in la yidhaahdo, ma abuuro xog cusub oo ku saabsan Mac ama ku darto macluumaadka cusub waa in. Waa maxay sababta? Files tirtiray aan la tageen isla markiiba. Waxay kaliya noqon aan la arki karin oo meel ah in ay qabsadeen sida in aad diyaar u isticmaal habka la calaamadeeyay. Sidaa darteed, marka aad saaray xog cusub on your computer, waxaa laga yaabaa inay qaadato bannaan ee dib loo isticmaali karo iyo overwrite faylasha tirtiray. Marka overwritten, faylasha tirtiray aan la soo kabsaday karaa hab kasta. Si aad u hesho fursad fiican u soo kabsanaya xogta aad, aad u baahan tahay inaad bixiso si ay u soo jeestaan. Markaas, waxaa la gaaray waqtigii ay u helaan jid ay ugu qabtaan soo kabasho Trash Mavericks hadda.
Waxa saddexaad: Ladnaansho Trash in Mavericks sida ugu dhaqsaha badan
Si perfrom kabashada Mavericks Tash, waxaad u baahan tahay in la helo qalab kabashada xogta Mavericks hore. Halkan waa talo aad u: Wondershare Data Recovery for Mac , kaas oo u ogolaanaya in aad ka bogsato oo dhan xogta ka qashinka, inta ay yihiin oo aan overwritten. Sidoo kale, waxa la user saaxiibtinimo. Dadka qaba heer kasta oo ka mid ah xirfadaha kombiyuutarka keliya u isticmaali kartaa. Waxa kaliya ee aad qaadataa saddex tallaabo ee nidaamka oo dhan. Download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah oo hadda.
Tallaabada 1. Dooro ka lumay File hab Recovey
Marka aad abuurtaan Wondershare Data Recovery for Mac on your computer, aad arki doonaa in ay jiraan xoogaa fursado ah in aad ka dooran karto. Si aad u soo kabsado Trash in Mavericks, kaliya aad u baahan tahay mid ka mid ah wax caadi ah, Lost Recovery File . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si aad u hesho dhammaan macluumaadka tirtiray ka qashinka on your computer Mavericks.
Tallaabada 2. Sawirka drive halkaas oo caasimadii qashinka
Ka dib dooranaya hab dib u soo kabashada, aad arki doonaa oo dhan drives macquul ah iyo qalabka lagu kaydiyo dibadda ku xiran Mac u soo bandhigeen by software ah. Mid ka mid ah halkaas oo qashinka caasimadii Dooro iyo guji Scan badhanka ugu sareysa ee suuqa si ay u bilaabaan helitaanka faylasha aad tirtiray.
Haddii aad raadineyso weeyna nooca files mid ah oo kaliya, waxaad nadiifin kartaa scan adigoo isticmaalaya Select File ture doorasho hoose, si ay u doortaan sawir, video, audio, dukumenti, iwm Markaas barnaamijka ka heli doontaa oo kaliya iyo muujiyaan aad bartilmaameed nooca file in natiijada scan. Waxaa idinka badbaadin doonaa waqti badan skaanka.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta Trash in Mavericks
Marka software u dhammeeyey scan ah, aad sabab u scan heli doonaa sida soo socota. Dooro galka qashinka, iyo in aad ku eegaan karo dhammaan faylasha recoverable waxa ku jira. Sax waxyaabaha in aad rabto iyo guji Ladnaansho button dusheeda iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Dadka isticmaala version maxkamad, fadlan badbaadin natiijada scan haddii aad ka heli faylasha aad rabto, aawadood oo ah xogta aad. Markaas iibsato code liisanka si aad u bilowdo software iyo aad iyaga ka soo kabsaday oo isticmaalaya Recovery biloow hab bixinta ee suuqa kala muhiimsan ee barnaamijka.